I-Semalt Expert: Wie Man Erfolgreiche Inhaltsforschung uLaufen Lässt
Ukuthengiswa kwe-Digital kubalulekile kumashishini aneplani ye-intanethi. Ngokuthengiswa kwegedijithali, i-website ikhethe ngakumbi ukunyusa isiseko sabathengi bayo kunye neenzuzo. Amanyathelo amaninzi anokunceda ukwandisa ukubonakala kwebhanki kubathengisi be-intanethi. Ezinye zezo zinto ziquka ukuphuculwa kweenjini zokusesha (SEO), iimkhankaso ezisebenzayo zoluntu (SMM) kunye nokuthengiswa kokuqukethwe. Ezi ndlela zihambelana neendlela ze-SEO ezifana nophando lwegama elingundoqo, ukuseta, ukubuyisela emuva kunye nokuqhuba iipampu ezininzi ze-PTC.
Kwimeko yokuthengiswa komxholo, kukho iindlela ezifanelekileyo ngenxa yokuba abantu bafumana umxholo ophezulu kwiwebhusayithi yabo - cctv in london. Abanomashishini abaninzi babhekana nengxaki yokukhetha phakathi kokuphi umxholo onokuwusebenzisa. Kule nkcazelo yedijithali, i-intanethi inezo zonke iziqulatho zedijithali. Ngomqondo ofanayo, unokufuna ukwenza izithuba zeblogi eziphezulu zomxholo wakho. Abanye bangasebenzisa umxholo oyintloko xa abanye bexhomekeke kumxholo wesibini. Ngendlela, u-Andrew Dyhan, uSemalt Umphathi weNtuthuko yabaThengi uqikelela ukuba kufuneka uhlukanise phakathi komxholo oyintloko kunye nesekondari ukuphumelela kwikampu yokuthengisa.
Umehluko phakathi kophando olusisiseko kunye nolulululwazi lwesibini
Abahlalutyi bachaza ukuba uninzi lwabafundi bewebhusayithi nqakraza i-URL nenjongo engqondweni. Uninzi lwezithuthi zakho zewebhusayithi azikhathaleli malunga nolwazi. Injongo eqhelekileyo yokutyelela iwebhusayithi kukufumana ulwazi okanye ukwenza ucingo kumsebenzi wesenzo..Nangona kunjalo, uphando olunzulu lwabantu luyakwazi ukwazi umehluko, oluchaphazela isigqibo sabo sokuguqula iwebhusayithi yakho.
Iingqikithi, le ngedatha evela ekuqaleni. Ingabandakanya uluvo lwabantu, ingxelo yebhan okanye olunye uhlobo lokunika ingxelo. Imizila ebalulekileyo yobungqina ibeka umnini weblogi / iwebhusayithi njengombhali, kunye nezicelo ze-scholarly zingachaza i-website nesihloko. Ngokwenene, kunokwenzeka ukusebenzisa kwakhona idatha eprayimari okanye uhlaziye umxholo wokuwusebenzisa kwenye indawo njengesixhobo sedatha yesibini. Idatha yeprayimari ikhuselekile, kodwa ezinye izicelo zingafuna ukubhekisa. Imithombo yolwazi yesibini isebenza kakuhle ngokucaphula abanye ababhali.
Imithombo yolwazi yesibini isebenze ubunzima ngaphezu kwemithombo yolwazi oluphambili. Zibandakanya ukucaphula iincwadi ezinokuqonda kunye nezifundo ezaziwayo. Umzekelo wokungena kwedatha unokubandakanya ukujoyina amabinzana afana ne "Ngomnye uphando ngo-Forrester okanye kwiCensus Bureau." Olu hlobo lwazi lugqugquzela ukuthembeka kolwazi lwakho okwenza uvavanyo lomfundi luvela kwimithombo yakho. Ukongezelela, ukucaphula imithombo yesibini kwandisa igunya lekhasi lakho lekhasi. Le meko inceda iinjinjini zokukhangela zibeka phambi kweminye imithombo.
Zonke iinkcukacha ze-intanethi zifuna ukubonakala okwaneleyo kwi-intanethi ukufikelela kwisiseko sabathengi esibalulekileyo. Kule nkalo, ukuthengiswa kokuqukethwe kuthatha indima ebalulekileyo ekuqinisekiseni impumelelo yalo mbandela. Amashishini asebenzisa amaziko ase-SEO enza ezinye zezo zinto. Nangona kunjalo, unokwenza ufunde indlela ezi zisebenzisayo ngayo iindlela zokuthengisa kunye nendlela yokusebenzisa nganye ngempumelelo. Kwiimeko ezininzi, ukuthengiswa komxholo kunokubandakanya iintlobo ezimbini zokuseta kwedatha: idatha eyimfuneko kunye nedatha yesibini. Esi sikhokelo sinokukufundisa ukuhluka kunye noko unokusebenzisa kwisethi ethile yedatha. Uyakwazi ukuvelisa idatha yakho kunye nokwenza iwebhusayithi enegunya elininzi.